Tuesday January 14, 2020 - 11:22:40 in News by Hadhwanaag News
Bogga wax ka qora arrimaha socdaalka caalamka ee Henley
Passport Index oo ay aqoonsan tahay hay'adda maamusha duulimaaduada caalamak ee IATA, ayaa qiimeyn ku sameeyay baasaboorada caalamka kuwooda ugu tayada wanaagsan ee la qadariyo, dadka watana ay si sahlan ugu safri karaan iyo kuwa ugu liita ee ay adag tahay in dadka sita ay si fudud ku tagaan dalal badan oo caalamka ah.
Dadka heysta baasaboorka dalka Japan ayaa dal ku gal la'aan ku tegi kara 191 dal oo caalamka, waxaana ay dal ku galka ama viishaa ay ka heli karaan meesha ugu horeyso ee ay ka galaan dalalkaas.
Waxaa muuqato in qiimeynta la sameeyay ay ugu horeeyaan dalalka qaaradda Aaasiya, waxaana kaalinta labaad galay dalka Singapore.
Dadka heysta baasaboorka dalkaas waxay fiisa la'aan tegi karaan inkabadan 190 wadan oo caalamka ah, halka kaalinta saddexaadna ay ku jiraan dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jarmalka oo muwaadiniinta u dhashay wadamadaas ay 189 dal ku tegi karaan si sahlan, iyadoona dal ku galka laga siinayo halka ugu horeysa ee ay ka galaan wadamadaas.
Baasaboorka dalka UAE ayaa tobankii sano ee la soo dhaafay wuxuu ku jiray kaalinta 47-aad, balse hadda waxaa lagu qiimeeyay kaalinta 18-aad, waxaana dadka heysta baasaboorka dalkaas ay dal ku gal la'aan tegi karaan 171 wadan oo caalamka ah.
3. Kuuriyada Koonfureed, Jamalka (189)
4. Talyaaniga, Finland (188)
6. Sweden, Faransiika (186)
7. Switzerland, Burtiqiis, Netherlands, Ireland, Austria (185)
8. Mareykanka, Ingiriiska, Norway, Griiga, Belgium (184)
9. New Zealand, Malta, Jmahuuriyadda Czech, Canada, Australia (183)
Dalal dhowr ah oo caalamaka ayaa baasabooradooda dal ku gal la'aan lagu tegi karaa waxkayar 40 dal. Waxayna ku jiraan lambarada ugu hooseeya: